Tag: mobile kushambadzira chikuva | Martech Zone
Tag: mobile kushambadzira chikuva
Jiwire: Nzvimbo-Inofambiswa Nesimba Kushambadzira
Chipiri, January 21, 2014 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Iyo JiWire Nzvimbo Girafu ™ chikuva inosimudzira nharembozha dzevateereri nemusanganiswa wenzvimbo, kubatanidzwa, huwandu hwevanhu, mamiriro, yekutanga uye yechitatu data data, nguva yezuva, zuva revhiki uye zvimwe zvinhu zvekununura vateereri izvo zvinonyanya kukosha kune yako brand. JiWire inogamuchira isingazivikanwe dhata renzvimbo kubva pamusoro pemazana emamirioni emidziyo, kusanganisira mafoni, mahwendefa & malaptop, achiendesa yakakura chiyero. Iyo chaiyo nzvimbo yedhata iyo ivo yavanokwanisa kuwana inovabvumira ivo kunongedza chaiko nzvimbo
Kushambadzira Mumitambo Yemagariro Kunoshanda?
China, May 31, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Panyaya yemaziso eziso uye kutarisisa span, hapana imwechete yekuparadzira chiteshi inogona kukwikwidza neyemagariro mitambo. Vanhu pasi rese vanoshandisa anosvika mamirioni mazana maviri emaminetsi pazuva vachitamba Shiri Dzinotsamwa. Mutambo mutsva weZynga, Cityville, wakwezva mamirioni zana evashandisi mumwedzi wayo wekutanga chete. Vatengesi vanogona kuyedza kubvuta chimedu chepie yekutamba nekutsvedza mune mimwe mitambo isina kujairika ine mhando,
Chinhu Chakaipa Nenzira Iyi Chinouya…
Chipiri, Kurume 11, 2008 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Wati wambonzwa here kunzwa kuti chimwe chinhu chaizvo, chakashata chaizvo chave kuda kuitika? Screenshot yeVista nezve Kumhanya pane yangu MacBookPro ine Kufanana 3.0 uye OSX Leopard.